लाप्पा खेल्नै लागेका दुई भाइलाई रोक्दै देउवाले भने,‘ हत्तेरी ! यो काम मैले नै गरेको हुँ’ • Makalu Khabar
लाप्पा खेल्नै लागेका दुई भाइलाई रोक्दै देउवाले भने,‘ हत्तेरी ! यो काम मैले नै गरेको हुँ’
काठमाडौं, माघ २६ । आज शुक्रबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा जात्रा नै देखाइयो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पाखुरा सुर्का सुर्कीसँगै झण्डै लाप्पा खेले । तर, दुई भाइको बीचमा टक्क प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उभिएपछि शान्त भयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा रावल अर्थमन्त्री कार्कीभन्दा केही समय छिटो नै पुगेका थिए । बैंठक द्रुत गतिमै चल्दै थियो । उपाध्यक्ष रावलले बैंठककै क्रममा सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाए ।
सीईओ गोविन्द पोखरेलको काम कारबाही ठीक नभएको औँल्याउँदै उनले सरकारको कामप्रति खबरदारी गर्दै भने,‘सीईओ गोविन्द पोखरेललाई चुनावमा पठाएर प्राधिकरणलाई अस्थिर बनाइएको छ र भूकम्प पीडितहरुप्रति गैरजिम्मेवार भएको छ ।’ त्यसपछि फेरी उनले भने,‘कुन ऐन र नियमावलीअनुसार थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय भयो ? हचुवाका भरमा जे गर्न मन लाग्यो त्यहिँ गर्ने ?’ त्यसपछि रावलले चर्काे स्वर निकाल्दै सरकारमाथि प्राधिकरणलाई अस्थिर र निकम्मा बनाएको आरोप लगाए ।
उनको कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले सुनेपछि मनमा के के गम्दै थिए । एक्कासी अर्थमन्त्री कार्की बैंठक हलभित्र प्रवेश गरे । त्यतिखेर रावल आफ्नो मन्तव्यको अन्तिम घडीमा थिए र भन्दै थिए यी सबै काम कारबाही गलत भएको छन् । चाँडो भन्दा चाँडो सच्याउनुपर्यो । त्यसपछि रावललाई प्रतिवाद गर्दै सबै नियमअनुसार नै कामकारबाही गरेको जवाफ दिए ।
त्यसपछि रावलले कार्कीलाई भने,‘तपाईं ढिलो आउनुभयो । मैले यहाँ विधि प्रक्रियाको कुरा गरेको छु । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्न मिल्दैन ।’ रावलले अर्थमन्त्री कार्कीलाई स्वच्छेचारी शब्द के उच्चारण गरेका थिए कार्की बुरुक्क उफ्रिए । बैंठकपछि रावलले भने ।
‘के रे ! हामीलाई स्वेच्छाचारी भन्ने’ भन्दै अर्थमन्त्री पाखुरा सुर्किए र रावलतिर अघि बढ्न खोज्दा रावलचाहिँ निर्देशक समितिबाट यो खाले निर्णय किन गरियो भन्दै अर्थमन्त्रालय फर्मान जारी गर्नुपर्ने अडान राख्दै थिए । यहिँ निहुँमा दुबै नेताबीच चर्काचर्की भएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले `हत्तेरी’ भन्दै हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । र, उनले दुवैलाई थम्थम्याए । त्यसपछि देउवाले वर्तमान सरकारले नै भूकम्पपीडितलाई एक लाख दिने निर्णय गरेको भन्दै विवाद नगर्न नेताहरुलाई आग्रह गरे ।